Human Rights Watch: Dhaqanka ciidanka Kenya wuxuu dhiirigelinayaa ku nabadda diidan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi – Mareeg.com: Hay’ado dhowr ah oo u dooda Xuquuqa Aadanaha ayaa ka digniin ka bixiyey sdia ciidamada Kenya ula dhaqmaan dadka Soomaalida ah ee ku sugan magaalada Nairobi.
Hey’adda Human Rights Watch oo ka mid ah hay’adaha soo saaray digniintaan ayaa sheegtay in dowlada Kenya ay sii kordhineyso dhiirigelinta dadka diidan nabada, waxeyna Kenya ugu baaqaday iney xakameyso hab-dhaqanka ciidankeeda.
Digniintan ay soo saareen ilaa dhowr hey’adood oo dhinaca xuquuqul insaanka ah ayaa lagu xusay in ciidamada Kenya ay xaafada Islii ku tilmaamaan in ay tahay barta lacagaha laga helo, tasoo ay sabab uga dhigeen musuqa hareeyay hey’adaha Kenya iyo mushaar la’aanta heysata ciidamada.
Dhinaca kale, talafishanka caalamiga ee Al-Jazeera ayaa qoray warbixin uu uga hadlaayo howgalada ciidamada Kenya ay ka wadaan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada ay ku badan tahay Soomaalida ee Easteigh.
Wariyaha warbixintan qoray ayaa leh tan iyo markii uu billowday howgalka waxaa aad u yaraaday socdka waddooyinka xaafadda Islii, waxaa kaloo yaraaday dadkii imaan jiray goobaha lagu shaaxo ee halkaas ku caweyn jiray.
Goobaha qaadka lagu cuno ayaa noqday kuwa haawanaya, sidoo kale waxaa yaraaday dadka imaan jiray goobaha muusiga lagu cayaaro.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Islii ayaa la hadlay saxaafadda, waxaana ay sheegeen in iyagoo leh sharci ama ID Card in laga qaado lacago baad ah ama la dhaho waa la idiin xiraa,
“Ma rabaan booliska ID Card ama warqadda sharciga oo waxaa lagu weyndiin laaluush haddii kale waa lagu xirayaa” ayuu yiri mid ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Kenya.